Ushizi ngumkhiqizo owusizo kakhulu futhi i-pantry ehlukile yamavithamini. Namuhla sizokhuluma ngesikhizi nge-cumin futhi sikutshele indlela yokupheka ngayo.
Ushizi nge-cumin nemifino
ubisi 2.5% - 500ml;
usawoti - 1,5 tsp.
ikhasi elibomvu elibomvu;
imbewu encaneway - pinch;
i-garlic - ucezu 1;
imifino - isipinashi, u-anyanisi, i-parsley, i-dill.
Sihlanganisa i-kefir nobisi nokushisa, kepha ungabilisi. Amaqanda atshayela, usawoti futhi athululele ubisi nge yogurt, kuyilapho ehlala exuba ingxube. Pheka ingxube kuze kube yilapho i-whey isuke. Khona-ke sisusa ipani nezinto ezivela emlilweni, vumela uphole phansi bese wengeza imifino enqunyiwe, i-caraway, i-garlic no-pepper. Sihlanganisa zonke izithako. E-colander sisakaza isirayi emigqeni engu-5 futhi sibeka inqwaba yethu. Shiya, kuze kube yilapho amanzi edonsa ngokuphelele, bese ubeka i-gauze ngokuqukethwe, ngakho konke uketshezi kuyisibuko, ungacindezela kancane. Ngemva kwalokhu, ushizi ususelwa epulatifeni, sibeka ingcindezi phezulu bese siyihlanza ubusuku esiqandisini.
Iresiphi yeshizi ne-cumin
ubisi - 3 amalitha;
Cottage shizi - 1 kg;
ibhotela - 100 g;
ukhilimu omuncu - 100 g;
amaqanda - izingcezu ezimbili;
imbewu ka-cumin - amathisipuni amabili;
Ubisi buthulule epanini futhi lushisa cishe uphephe. Thela ushizi we-cottage ku-pan, hlanganisa nokushisa elangeni elincane kuze ubisi luqale ukugoqa. Ngemuva kwalokho, okuqukethwe kuthululwa ku-colander ehlanganiswe ne-gauze bese ivumela i-serum ikhiphe. Ubuningi obumphumela buphinde bubekwe epanini futhi uphinde uphethe, kuyilapho uvuselela njalo. Manje engeza ukhilimu omuncu, iqanda nebhotela. Susa ekushiseni, usawoti bese ufaka imbewu ehlanziwe. Gqugquzela kuze kube yunifomu bese usakazwa nge-gauze. Siyithumela ngaphansi komshini kuze kube yilapho ipholile ngokuphelele. Bese uyisuse ku-gauze bese uyisika zibe yizicucu.
Ikhaya lenziwe ushizi nge-cumin
ubisi olunamafutha - 1 l;
ukhilimu omuncu - 200 g;
soy sauce - 3 tbsp. izinkezo;
i-cumin - ½ tsp.
Ukhilimu omuncu uhlanganiswe ne-soy sauce futhi siqhuba amaqanda. Chofoza kahle u-anyanisi. Ubisi bulethwa ngamathumba bese kuthululwa kuwo ingxube yeqanda elimnandi. Pheka ngokushisa okuphansi kuze kube lapho i-whey iqala ukuhlukanisa, cishe imizuzu emihlanu. Ekugcineni, engeza u-anyanisi ne-cumin. Susa i-pan emlilweni. I-colander ihlanganiswe ne-gauze futhi siyadlulisela inqwaba ebangela kuyo. Sinika i whey ukukhipha futhi ngokuqinile ukudonsa umphumela gauze ushizi. Sifaka ushizi e-gauze ku-colander, uyibeke epulatifeni, uyiqede bese uyilayisha emakhazeni amahora angu-12. Bese uvula i-gauze bese usika ushizi ophelile.
Indlela yokupheka ama-royal prawns?
Fritters ngaphandle kwemvubelo
Ubhuloho obumanyolo obisi
Inkukhu fillet nge utamatisi
Isigubhu saseTurkey kuhhavini
I-Curry sauce ekhaya - iresiphi
Izitsha ezivela ku-broccoli
Izindawo zokuhlala zeLwandle laseCaspian
Amabhantshi afaka imfashini - entwasahlobo-ehlobo 2015
I-mononucleosis ephathekayo - izimpawu
Isifuba esikhulu sabadwebi
UMiranda Kerr no-Evan Spiegel bashadile ngasese
Yini ongayenza kusuka hawthorn?
Indlela ukupheka amazambane casserole?
Yini okufanele ugqoke isicathulo se-trilby?
Ungasusa kanjani i-post-acne?
Indlela yokuqinisa imisipha?
Kungani ibandla ligula?
ULiam Payne wenqaba ukushada noCheryl Cole
Ingaphakathi lendlu ngezandla zakho
Iklabishi evilaphayo ishayela kuhhavini - zokupheka ezilula, ezimnandi nezokuqala zansuku zonke
I-Mount Kle Го